'Ngingumakhwapheni futhi lokho kuyangisebenzela' | News24
'Ngingumakhwapheni futhi lokho kuyangisebenzela'
Funda nalu udaba lomfundi wethu ochaza kabanzi ukuthi kungani kumjabulisa ukuba ngumakhwapheni. Nalu udaba lwakhe:
Yebo, ngingumakhwapheli! Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngingathandana nomunye umuntu, kepha ubudlelwano bami nobaba womntanami kwangiholela lapha. Sengithandane nobaba wengane yami iminyaka emihlanu, kepha kuyona yonke le minyaka yimina kuphela obesebenza.
Kuthe ngonyaka owedlule ngahlangana nowesilisa oshadelwe wangenza ukuthi uthando ngilubuke ngamanye amehlo. Akakaze angenze ngizizwele sengathi ngingumakhwapheni wakhe. Uyangikhipha siyodla ngaphandle, angilethele isidlo sasemini emsebenzini, uyangifonela sonke isikhathi engibuza impilo, ungithumelela nemiyalezo emtoti futhi akakhohlwa ukubuza ukuthi indodana yami injani.
Ngicabanga ukuthi ukungatshengisi kuzikhandla kukababa womntanami yikho okungenze ukuthi ngiphume ngiyofuna uthando kwenye indawo, ngoba selokhu ngiqale ukujola nale ndoda eshadelwe sengibonile ukuthi ubaba wengane yami udlala ngami.
Yimi okumele ngimnakekele, ngimthengele izingubo zokugqoka, ngimyise eholidini, nokunye okuningi, kepha yize kunjalo akanaso isikhathi sami. Okuxakayo ukuthi uhlezi enaso isikhathi sabangani bakhe.
Uma ngimvakashele, sichitha isikhathi ndawonye uma efuna ucansi kuphela. Uyambona nje ukuthi akazimisele ngokulungisa isimo sakhe, yingakho-ke ngikhethe ukuba ngumakhwapheni. Ukuba ngumakhwapheni kuyangisebenzela ngoba isoka lami elisha lichitha isikhathi salo esiningi nami kunonkosikazi walo. Kwesinye isikhathi ngiphatheka kabi, kepha akukho engingakwenza uma kungukuthi yilapho ngithola khona uthando.
Sekuphele unyaka ngithandana nomuntu wami oshadile, kwesinye isikhathi ngiba nomzwangedwa uma ngimdinga uthole ukuthi uchitha isikhathi nomndeni wakhe.
Ngokwami angifuni ukushada ngoba ngiyayithanda impilo yami kwezothando ngendlela eyiyo manje, noma mhlawumbe yingoba ngiyesaba ukuthola umuntu ongeke angiphathe kahle.
Ngokubona kwami omakhwapheni baphila impilo emndani namadoda abo ashadelwe.